indawo yokuhlala yemvelo `` yomoya emahlathini'
Créancey, Bourgogne-Franche-Comté, i-France
I-gîte itholakala endaweni encane ebukekayo yase-Auxois, ephakathi kwamadolobha amabili amahle i-Côte d'or Beaune ne-Dijon, ukufinyelela kalula kuyo, i-1 km ukusuka etoll yasePouilly en Auxois (A6 ne-A38)
leli kotishi liyisisekelo esikahle sokuhlola iBurgundy! Burgundy Canal, Morvan, umzila wewayini ....
Lonke ulwazi lomndeni lusetshenziswe ukwenza le gîte ibe mnandi futhi isebenze ukuze wenze ukuhlala kwakho kuzolile futhi kuphumule, kuxhumene nemvelo.
Ikotishi lihlanganisa igumbi lokuhlala elikhulu elingu-40 m2 elinendawo yekhishi (isitofu segesi, ihhavini likagesi, i-microwave, ifriji, umshini wokugeza izitsha, umenzi wekhofi we-pod kanye nomenzi wekhofi wokuhlunga) kanye nendawo yokuphumula enasofa aba-2 abaguqukayo; Igumbi lokugeza kanye namagumbi okulala ama-4 okuhlanganisa ne-master suite.
Konke okudingayo kwengane nengane (umbhede, ubhavu ophefumulayo, isihlalo esikhuthazayo, ibhodwe lengane, indlu yangasese ekhuthazayo ...)
50 m² wethala kanye nokufinyelela ku-1000 m² wohlaza: nxazonke zendlu idlelo nengadi yezithelo ekwazi ukuhlalisa abangani bethu amahhashi!
Uzoba nesikhathi esiningi sokuhamba ukuze ubuke imvelo, uphumule, uzindle noma ufunde, futhi ungaletha namathoshi uma ufuna ukuhlala futhi ubukele izinkanyezi engadini.
Kungase kuqashiswe imibhede nelineni lasendlini ngethawula (€ 10 ishidi lombhede kanye ne-€ 10 amathawula angu-3)
Indawo ilungele ukuphumula esizeni noma ukuthola izindawo ongazithakaselayo eziseduze:
Isikebhe sikagesi sihamba eBurgundy Canal, noma sihambe ngezinyawo Ikotishi lethu litholakala ku-GR indlela yamachibi angu-5 (200 km isiyonke), ngebhayisikili, eduze komsele, umgwaqo wamabhayisikili edolobhaneni.
Amachibi ama-2 anolwandle nokubhukuda okugadiwe (amakhilomitha ayi-6 kanye ne-10) namachibi ama-3 abadobi nabaqwali (amakhilomitha ayi-6 kanye ne-10).
I-Auxois Park (30 km) yemukela wonke umndeni kumahektha angama-40, imidlalo nokugibela, izilwane ezingama-500 (izinhlobo ezingama-90) kanye nedamu lokubhukuda.
idolobhana lasendulo laseChâteauneuf (8 km), idolobhana elihle kakhulu eFrance, inqaba yaseCommarin (8 km) kanye nedolobhana elibukekayo lasendulo iMont Saint Jean (20 km).
Ikotishi litholakala kumakhilomitha ambalwa ukusuka epaki iMorvan kanye neSaulieu edume ngendawo yayo enkulu yezinkanyezi ezi-2 kaBernard Loiseau.
Okunye ukuvakashelwa kungenzeka: i Alesia Museum kwepaki (40 km), The Abbey of Fontenay eduze imithombo the Seine (60 km), The Abbey of Flavigny sur Ozerain futhi Anis zayo ezidumile (40 km), Autun (40 km) kanye layo izinsalela eziningi zamaGallo-Roman, inkundla yemidlalo yaseshashalazini yamaRoma noma ithempeli likaJanus isonto laseVézelay, (1 h) indawo ephakemeyo ye-telluric, beza ukuzohlangana nabasemhlabeni abanomdlandla kanye ne-cosmic!
Uma isimo sezulu sishisa kakhulu ungavakashela imigede yase-Bèze (50 min) noma leyo ye-Arcy sur Cure (1 h)
Futhi-ke isivini sase-Côte d'Or kanye nomzila waso wewayini.
Ukubhukuda: 6 km, Izitolo: 2 km, Ukugibela amahhashi: 6 km, Ihlathi: m, Isiteshi: 40 km, Igalofu: 9 km, Ichibi lokubhukuda: km, Ukudoba: 3 km, umzila wamabhayisikili: 300 m, Ithenisi: 2 km , Isivini: 40 km, Sailing: 6 km
Sihlala endaweni eyodwa futhi singasebenza uma kunesidingo !!
Hlola ezinye izinketho ezise- Créancey namaphethelo